टाउको बेस्सरी दुख्यो ? भान्छामै भेटिने यी औषधी, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
स्वास्थ्य टाउको बेस्सरी दुख्यो ? भान्छामै भेटिने यी औषधी, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: शारीरिक श्रमको कमी, तनाव, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखाइको समस्या पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
ल्वाङ र नुनको प्रयोग:
कागती र तातो पानी:
जीरा र अदुवाको रस:
यी व्यक्तिहरुले भुलेर पनि नखानुहोस् तितेकरेला:
काठमाडौँ । करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो। तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ।
त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैनः
फर्टिलिटी समस्या भएमा:
पायल्स छ ?
जसमा कलेजोको समस्या छ:
जसलाई सुगर कम छ:
आधुनिक जीवनशैली र अव्यवस्थित आहार–विहारले अधिकांश मानिसहरु कब्जियतको शिकार हुने गरेका छन् । कब्जियत नै अन्य पाइल्स, फिस्टुला, फिसरजन्य रोगको कारक समेत बन्न जान्छ ।
शरीरलाई फाइदा हुन्छ कालो चियाले
हिले गर्मी र जाडोको मिश्रित समय छ । दिउँसो गर्मी भएपनि बिहान र अबेर बेलुका चिसो बढ्न थालेको छ । यस्तोमा नेपाली समाजमा चिया सेवन अनिवार्य झै बनेको छ ।